गजेन्द्र बाेहरा शुक्रबार, चैत २०, २०७७
सपनाका असिम आवेगमा उनी हुत्तिइरहेका हुन्थे घरिघरि।
जिन्दगीमा, ‘केही नयाँ गर्न!’
दिमाग भाउन्न हुन्थ्यो फेरि– गर्ने चाहिँ के?
असिमलाई थाहा थियो, भोलि जन्मिने तमाम प्रश्नका लागि आजैको जवाफ हो– सपना।
अनि जिन्दगी जिउनका लागि एक ‘जरुरत’ हो– सपना।
‘केही त नयाँ गरौं न!’
जागिरे जिन्दगीले बेला–बेला बिथोलिरहन्थ्यो।
काठमाडौंमै हुर्के बढेका असिममान सिंह बस्नेत।
काठमाडौंका ‘टुक–टुके’ देखि माइक्रो अनि साझा बसहरूमा यात्रा गर्ने यात्रुका सास्ती उनले नजिकैबाट देखेका छन्।
धेरैपटक त आफैंले भोगेका पनि छन्। अटेसमटेस, ठेलमठेल। भीडभाड। अनेकन सास्तीका अनकौं कथाकहानी सुनेका छन्।
यस्तै कुनै कथाले जिन्दगीको ‘प्लट’ नै बदलिदिन्छन्। जीवनका कुनै यस्तै प्लटहरूले कयौं कथाहरू जन्माइदिन्छन्।
आकर्षक जागिर त छँदै थियो। तर, भित्रभित्र केही न केही नयाँ काम गर्ने हुटहुटी भने झन्–झन् छिप्पिँदै थियो।
त्यही बेला मधेश आन्दोलन सुरु भयो। सारा नाकामा हडताल सुरु भयो। त्यही बहानामा भारतले नेपालमाथि अघोषित ‘नाकाबन्दी’ गरिदियो।
नेपालीले जसोतसो सहे। सबैभन्दा बढी सास्ती त ‘डिजेल–पेट्रोल’मा भयो। सवारीसाधन कम चल्न थाले। पेट्रोलियम पदार्थ हाहाकार भयो।
धन्य, असिमको एकजना साथीसँग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल थियो। केही साथीहरू त्यसैमा चढ्थे पालैपालो। खाली हुँदा सडकमा अलपत्र परेकाहरूलाई ‘लिफ्ट’ दिन्थे।
त्यही बेला देशमा ‘लिफ्ट’ दिने चलन सुरुवात पनि भयो।
असिमले पनि त्यो इलेक्ट्रिक बाइकमा धेरैलाई ‘लिफ्ट’ दिएका छन्।
त्यो बेला उनलाई थाहा भयो– नचिनेका मान्छेलाई पनि लिफ्ट त दिन सकिने रहेछ।
एउटै बाइकमा नचिनेको मान्छेसँग बस्दा बोल्न मन लागिहाल्ने!
धेरैसँग कुराकानी भयो। धेरैथरिका कथा–कहानी सुन्न र सुनाउन पाए।
त्यही बेला उनले थाहा पाए– नचिनेका मान्छेसँग पनि त कथाहरू हुँदा रहेछन्। नचिनेकैलाई पनि सुनाउन सकिने कथा हुनेरैछन्।
अपरिचतहरूका परिचित कथा।
एकपटक उनले आफ्नै गाडी पनि चलाए। गाडी सानो थियो ‘नानो कार’ मुस्किलले तीनजना बस्न मिल्ने। तर, स्थिति यस्तो आइदियो कि, उनले ६ जनालाई कोचाकोच गरेर राख्नुपर्नेभयो।
कोचिएरै भए पनि बसेपछि एकजना महिलाले भनिन्– बच्चाबच्ची भएरमात्रै हो। नत्र त म हिँडेरै गइहाल्थेँ।
अहो! कस्तो पीडा।
‘दुःख त जहाँ जसलाई पनि त हुँदोरहेछ भन्ने कुरा त्यो बेला थाहा पाएँ,’ असिमलाई लाग्यो, ‘दुःखका पाटा पो फरक हो। भोगाइ त एउटै हुने रहेछ।’
कथाका यस्ता हजारौं टुक्रा छन्, ती जोडिँदै–जोडिँदै आएर असिमको जीवनमा एउटा नयाँ ‘प्लट’ खडा गरिदिए। एउटा हुटहुटीलाई हुटहुट्याउने अनेकन कथाहरू त्यसैगरी जोडिन थाले।
अनि, असिमहरूको एउटा समूहले छलफल गरे– नेपालमा ‘राइड सेयरिङ’ को बिजनेस किन नचलाउने?
सहरमा एउटा नयाँ संस्कार जन्मिँदै थियो। सवारीसाधन अभावमा मानिसले आफ्ना गाडी–बाइकामा सडकमा हिडिँरहेकाहरूलाई लिफ्ट दिन थालेका थिए।
असिमहरूले त्यही एउटा संस्कारलाई व्यावसायिक रूप दिन थाले।
‘सुरुमा त हामीले अमेरिकी कम्पनी उबरका लागि पनि कुरा गर्‍याैं। लास्ट आवरमा आएर लगानी आउन सकेन,’ असिम सम्झिन्छन्, ‘तर, पनि हामीले हिम्मत हारेनौं र भारतका ओलाजस्ता कम्पनीहरूसँग पनि कुरा गर्‍याैं। त्यो पनि आउन सकेन।’
यता, साथीहरू कम्पनी खोल्ने भनेर तम्तयार भइसकेका थिए। कार्यालय पनि तयार भइसकेको थियो। तर, लगानी आइरहेको थिएन। जागिर छाडेर ‘नयाँ’ कामको हुटहुटीले एक ठाउँमा जोडिएका सबै अत्तालिन थालिसकेका थिए।
‘उबरजस्तो संसारकै ठूलो कम्पनी यहाँ लगानी गर्न तयार भइसकेको थियो। हामी पनि उत्साहित थियौं। यति ठूलो कम्पनीले लगानी गर्न तयार भएपछि यहाँ केही त गर्न सकिने रहेछ नि भनेर हामी उत्साहित भएका थियौं। तर, त्यस्तै केही भयो र त्यो लगानी भित्रिन सकेन,’ असिमहरू त्यो पीडा त कसरी भुल्न सक्छन् र, ‘हामी त त्यो बेला फ्रस्ट्रेट नै भइसकेका थियौं। सबै साथीहरू कम्पनी छाड्ने मुडमै पुगिसकेका थिए।’
तर, काम त गर्नै थियो।
सपना देख्न पो सजिलो हुन्छ! सपनाका पङ्ख समाउन त सजिलो कहाँ हुन्छ र!
असिमहरूले आफू बस्ने कुर्सी, टेबुल आफ्नै ‘गच्छे’ अनुसारकै जोहो गर्न थाले। सस्ता अनि सजिला फर्निचरहरूले अलिअलि भए पनि कार्यालय भरिन थाल्यो।
त्यसैबेला कसैले ‘आइडिया’ दियो– पठाओ।
अहो! नामै नसुनेको कम्पनी। कस्तो हुने हो, के हुने हो। नेपालमा चल्ला कि नचल्ला!
आसाका किरण जति तेजिला हुन्थे, डरका धर्साहरू पनि उति नै बाक्लिन थाल्थे।
तर, पनि सपनाको हुटहुटीले लखेटिरह्यो। असिमहरू त ‘पठाओ’ बुझ्न बंगलादेश नै पुगे।
मुख्य कार्यालय बंगलादेशमा रहे पनि खासमा यसको प्रमुख लगानीकर्ता कम्पनी अमेरिकामै छ। अहिले सबै व्यवस्थापन अमेरिकाकै कम्पनीले हेर्छ।
खासमा बंगलादेशमा पठाओले खाद्यान्न पुर्‍याउने काम गर्थ्याे। त्यसैले उसको लोगोमा एउटा साइकल चलाएर पछाडि एउटा झोला बोकेको चिह्न छ।
तर, पछि उसले आफ्ना व्यावसायिक हाँगाहरू विस्तार गर्‍याे। मोटरसाइकलमा मान्छे बोक्नेदेखि ट्याक्सीहरूलाई पनि ‘अनलाइन’ मा ल्यायो।
यसअघि नै पठाओका केही मान्छे बंगलादेशबाट नेपाल आइसकेका थिए। नेपालमा धेरै मोटरसाइकलहरू चलेको देखेर उनीहरूले यहाँ पनि ‘राइड सेयर’ सञ्चालन गर्ने सोंच बनाइसकेका थिए।
सपनाका ‘मेल’ कतै न कतै ठोक्किन पुगिहाल्छन्। ‘असिम’ चाहनाहरूसँगै पलाएका सपना आखिर साकार बाटोमा मेल खाइसकेका थिए।
‘पठाओ’ त्यसैको नेपाली संस्करण हो।
सपना देख्न जति सजिलो हुन्छ, त्यसको यात्रा झन् कठिन। उसलाई पछ्याउन जति सजिलो लाग्छ, त्यसलाई पाउन झन् कठिन।
तर, कठिनै कठिन अनि चुनौती नै चुनौतीहरूबीच फूलेका ‘असिम’ सपनाहरूको लय समाउँदै जाँदा अगाडिका ढोकाहरू आफैं उघ्रिँदै जान्छन्।
पठाओ आयो। ‘एप’ पनि बन्यो।
अब कसलाई कोसँग कहाँ पठाउने? चुनौतीहरू पनि ‘असिमै’ थिए।
सुरुमा त ‘राइडरै’ खोज्न तनाव।
‘बाइक ठड्याएर उभिएकाहरूलाई हात जोड्दै तपाईं जाने ठाउँसम्म पछाडि बसाएर मान्छे पुराइदिनुहुन्छ? भन्दा ‘हामीलाई के ड्राइभर सम्झ्या?,’ उल्टै हकारेका पनि छन,’ जागा भइसकेका सपनाका अघि ‘असिम’ हरू के हार खान्थे, ‘हजुरलाई धर्मै हुन्छ भनेरसमेत कन्भिन्स गरिन्थ्यो।’
केही दिनमा धेर–थोर राइडरहरू जम्मा भए।
त्यसपछि अर्को ‘च्यालेन्ज’ थियो– अब ‘पठाओ’ मा कसलाई पो पठाउने?
एउटा अपरिचतको पछाडि बसेर बाइकमा यात्रा गर्न गराउन कम्ती कठिन थिएन।
तर, जिन्दगी बाँच्ने सजिला बाटा छाडेर हिँडेका उनीहरूले त्यो च्यालेन्ज पनि सजिलै सामना गरे। मान्छे खोज्दै ‘पठाओ’ मा पठाउँदै गर्न थाले।
‘कोचिएर’ कच्याक–कुचुक जीवन बाँचिरहेका काठमाडौंका सार्वजनिक यातायातका यात्रुहरूमाझ विस्तारै ‘पठाओ’ तिर तानिन थाले।
मोबाइल निकाल्यो। एप खोल्यो। ठाउँ छान्यो। एकैछिनमा बाइक हुँइयय आफू बसेको ठाउँमा आइपुग्छ। कति पैसा लाग्छ? त्यो मोबाइलमै देखाउँछ।
नो बार्गेनिङ। छोटो बाटो लैजान्छ कि लामो? नो टेन्सन।
बाइक कता जाँदैछ, कहाँ गुडिरहेको छ? म्यापमै देखिन्छ– सुरक्षाको नो चिन्ता। ट्याक्सीलाई हात जोड्नुपरेन।
‘ह्या त्यत्ति नजिक वा टाढा त जाँदैन, मिटर बिग्रेको छ। मिलाएर दिनुस्। यति पैसा लाग्छ, जाने भए जानुस् नत्र हुँदैन।’ ट्याक्सीवालाहरूको ‘दादागिरी’ सहनुपरेन।
आहा! यस्तो पो सेवा। छोटो समयमै ‘पठाओ’ लोकप्रिय भइसकेको थियो।
वर्षौंसम्म ट्याक्सीको दादागिरी सहेका, हेपिएका अनि सार्वजनिक यातायातमा ‘कोचिने’ काठमाडौंका साधनविहीनहरू पठाओलाई पछ्याउन थालिसकेका थिए।
‘हामीले सुरुमा केही हजारसम्म सोचेका थियौं। तर, यस्तो भइदियो कि त्यो त हामीले सोचेको भन्दा पनि कहाँ पुग्यो पुग्यो,’ र त, आज ‘असिम’ हरूलाई अब पठाओको सिमानै कोर्न गाह्रो भइसकेको छ।
त्यहीबीच ‘ट्याक्सी’ वालाहरूको फेरि अर्को दादागिरी सुरु भयो। उनीहरू पठाओविरुद्ध संगठित भएर लाग्न थाले। ट्राफिक प्रहरीले पनि दुःख दिन थाल्यो।
निजी साधनमा ‘भाडा’ का यात्रु राख्न पाइँदैन भनेर पठाओलाई रोक्न खोजियो। नेपालमा यस्तो व्यवसाय चलेकै थिएन। राज्यसँग कानुनै छैन।
सार्वजनिक सवारीबाट वाक्क दिक्क अनि ट्याक्सीवालाको दादागिरीमा निरीह बनेकाहरू पठाओलाई आफ्नै साधन ठानिसकेका थिए। सरकारले पठाओलाई दिने हरेक ‘सास्ती’ सँग अब पठाओ चढ्नेहरू नै लड्न थाले। सरकारलाई गाली गर्न थाले। ट्याक्सीवालाहरूलाई सराप्न थाले।
जनताका अघि आखिर सरकार पछि हट्नुको विकल्पै थिएन। पछि केही नियमनको प्रयास पनि गरियो। तर, सरकारले अझै कानुन निर्माण गरिसकेको छैन।
अब ट्याक्सीहरू पनि पठाओमा जोडिन आइपुगेका छन्। अहिले पठाओले ‘पठाओ फुड’ भनेर ‘डेलिभरी’ पनि दिन थालेको छ। त्यसमा अधिकांश साइकल चलाउनेहरू छन्।
‘हात जोडेरै’ राइडहरू जम्मा गरेको ‘पठाओ’ सँग आज १ लाख ५० हजारभन्दा बढी ‘राइडर’ हरू जोडिइसकेका छन्। कोरोना संक्रमणले गर्दा केही समय थलिएको ‘पठाओ’ ले फेरि गति समातिसकेको छ।
आज दैनिक ६० देखि ८० हजार मानिस ‘पठाओ’ चढेरै गन्तव्यको यात्रा तय गर्छन्।
पठाओलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गरेको छ। तर, यहाँ कमाइ भएको एक पैसा पनि असिमहरूले विदेश पठाएका छैनन्। बरु त्यही पठाओ ब्रान्डमा नयाँ नयाँ कामका लागि लगानी गरिरहेका छन्। उसका हाँगाबि‍ंगाहरू फैलाउँदैछन्।
पठाओले ‘यात्रु’ राखेर यात्राको ‘साझेदारी’ मात्रै गरेको छैन, आधुनिकताले छोपिएर पनि ‘संकुचन’ मा छेलिएको सहरको जिन्दगीलाई अलि खुला पनि बनाइदिएको छ।
अपरिचितहरूलाई पनि परिचित बनाइदिएको छ।
सबैका जीवनमा आ–आफ्नै कथा हुन्छन्। यात्राका क्रममा दुई अपरिचित आ–आफ्नै कथाबाट परिचित भएका छन्। पठाओले ‘यात्रु’ मात्रै बोकेको छैन, यसले समाजमा एउटा ‘सदभाव’ पनि छरेको छ। एकअर्कामा विश्वास रोपिदिएको छ।
र, आज ‘असिम’ सपनाहरू लाखौं जीवनमा कुदिरहेका छन्, अनवरत।
अब सायद, रोकिँदैनन् यी। थामिदैनन् यी।